I-china Adjustable Hammer Crusher abavelisi kunye nabathengisi | Umenzi weBricmaker
Le isando isityumzi yi isityumzi adjustable nefuthe. I-crusher rotor igcina ngokwaneleyo amandla okutyhoboza izinto, yenza izinto ezingafunekiyo zityumze phantsi kwempembelelo yentloko yesando kunye nokungqubana nomngxunya wokulwa.
I-liner ephezulu yokulwa ne-counterattack liner iphucula izinga lokubetha umbandela, ngaloo ndlela ifezekisa injongo yokutyunyuzwa kwezinto (uqikelelo lwe-particle gradation: 30% ngaphantsi kwe-0.5mm, 25% ngaphantsi kwe-0.8mm, 30% ngaphantsi kwe-1.5-2.0mm, 15 % ngezantsi kwe-3.0mm).
Umatshini unefuthe elikhulu, uthuli oluninzi, izinto ezincinci ezibuyayo, kwaye unokunciphisa uthuli ngokuzenzekelayo. Xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo, imveliso imalunga neepesenti ezingama-30 ngaphezulu kwaye imveliso yamandla emveliso imalunga nama-40% ngaphantsi.
Intloko yesando kunye ne-liner enganyangekiyo kulula ukuyitshintsha, kwaye ipleyiti yokulwa kunye nepleyiti engezantsi kwesikrini iyahlengahlengiswa. Isixhobo esifanelekileyo sokutyumza i-shale enzima, i-gangue yamalahle kunye ne-ores.
Umsebenzi Imathiriyeli ekrwada ityumza
Umgaqo wokuSebenza Ukutyunyuzwa kwesando
a) Ukuhlolwa kwesiqhelo kufuneka kwenziwe ngaphambi kokuqala, kususe imiqobo echaphazela ukusebenza kwaye ujonge ukuguda kweebheringi.
b) Isityumzi saqala ukusebenza phantsi komthwalo, kwaye isinyithi sivuliwe. Emva kokusebenza okuqhelekileyo, loo nto ifakwa ngokulinganayo.
c) Xa ukumisa, feeder kufuneka imiswe, ngoko isityumzi kufuneka icinyiwe, kwaye idischarger kufuneka icinyiwe.
d) Izinto ezingatyumzi azinakungena kwisityumzi, kwaye kufuneka zivalwe kwangoko ukuba kukho okungaqhelekanga.
e) Akuvunyelwe ngokungqongqo ukusebenzisa nayiphi na into ukujonga izixhobo ngelixa ziqhutywa.
f) Izikhuselo zokukhusela kufuneka zifakwe kwi-pulley ye-spindle kunye ne-motor pulley.
g) Jonga iibholiti ze-ankile kunye neebhontshi zonxibelelwano ukuthintela ukuba zingakhululeki.
h) Jonga izinto ezisetyenziswa rhoqo.
i) Umxholo ukufuma izinto ukungena isityumzi kufuneka ≤12%.
j) Jonga ukuthwala kwentloko yesando kunye ne-hammer pin rhoqo ukunqanda iingozi ezibangelwa kukuwa kwentloko yesando ngenxa yokunxiba okugqithisileyo kwentloko yesando kunye nephini lesando.
k) Xa ukunxiba kwentloko yesando kungasenelanga, kufuneka ijikwe kwaye isetyenziswe. Xa intloko yesando itshintshiwe, ibhalansi esisiseko yamalungu ajikelezayo kufuneka igcinwe. Umahluko wobunzima phakathi kweentloko zesando kwicala elilinganayo akufuneki ukuba ngaphezulu kwe-150g.
Egqithileyo Iphindwe kabini iRotor Hammer Crusher
Okulandelayo: Isantya esiphezulu seRoller Double Crusher